❤️ Ahoana ny famafana ny kaonty Instagram - Winches Club
Hamafa na hamono ny kaonty Instagram
Tsy maninona ny antony hamafana ny kaontinao Instagram, tsy te hanamora izany ho anao ny goavambe media sosialy. Raha ny kaontinao dia voasakana na mihidy, azonao atao ny mamafa ny kaontinao ary manomboka indray.
ianareo tsy afaka mamafa na esory mivantana ny kaontinao Instagram avy amin'ny fangatahana findainao. Mba hanaovana izany, tsy maintsy mandeha any amin'ny pejy fanesorana kaonty voatondro.
Manana ny safidy hamafana maharitra ny kaontinao ianao Instagram, na esory vetivety izy io. Raha te hahafantatra ny fomba hanaovana ny iray na ny hafa ianao, araho fotsiny ireo dingana tsotra ataonay.
Ahoana ny fomba hamafana ny pejiko Instagram?
Maharitra ny famafana ny Instagram anao – ho very ny sarinao rehetra, Videos, mpanaraka sy hafatra – ho very ny fanatrehanao eo amin'ny sehatra media sosialy.
Raha izany no tianao hatao, ka andao atomboka.
Mandehana mankany amin'ny pejy famafana kaonty Instagram Eto.
Raha mbola tsy tafiditra ao amin'ny kinova tranokala ianao, hahazo bitsika ianao hanao izany.
Homena anao ity efijery ity:
Safidio ny antony mamafa ny kaontinao.
Ampidiro ny teny miafin'ny kaontinao ary kitiho “Fafao maharitra ny kaontiko”.
Ahoana no ahafahako mamono ny kaontiko ?
Aza adino fa tsy azo atao ny miverina amin'ny kaonty voafafa maharitra. Raha te hiala amin'ny media sosialy vetivety ianao, ny famonoana ny kaontinao dia mety ho safidy tsara kokoa.
Ny famonoana ny kaontinao dia midika fa takona tanteraka amin'ny mpampiasa Instagram rehetra izy io, ary azonao atao ny mamerina azy io raha tianao.
Azonao atao ny manafoana ny kaontinao ao amin'ny kinova desktop an'ny Instagram:
Mifandraisa amin'ny kinova desktop an'ny Instagram amin'ny instagram.com
Tsindrio ny bokotra “ovao ny piraofilina” eo akaikin'ny anaran'ny kaontinao
Tsindrio eo “Esory vetivety ny kaontinao” eo ambanin'ny pejy.
Hamafiso ny antony tianao hamonoana ny kaontinao, dia ampidiro ny teny miafin'ny kaontinao.
Tsindrio eo Vonoina vetivety ny kaonty.
Vantany vao tapaka ny kaontinao, azonao atao ny mampihetsika azy amin'ny fotoana rehetra. Midira fotsiny amin'ny kaontinao toy ny mahazatra dia ho hita eo indray ny kaontinao.
Izay ihany no misy.
Tsarovy fa ny fanafoanana ny kaontinao dia maharitra, raha ny fanalana andro dia vonjimaika. Raha manana fisalasalana ianao, Manoro hevitra anao izahay mba hamono ny kaontinao fotsiny mba hahafahanao mijery azy indray raha tianao.
Lahatsoratra manarakaAhoana ny fomba fanaovana ny Instagram anao manokana